जो अनिश्वरबादी थिए, उनैलाई ईश्वर बनाई दिए - NepaliEkta
9 May 20209May 2020 Nepaliekta	0 Comments
नेपालको कपिलवस्तु जिल्लाको तिलौराकोटमा ई.पू ५६३ मा बैशाखी पूर्णिमाका दिन जन्मीका गौतम बुद्धको २५६३ औं जन्म दिवस दुई दिन पहिला विश्वका विभिन्न देशहरुमा मनाइएको छ । हाम्रो देशको मात्र नभै संसार भरिका मानिसहरुका लागि प्रेणाको श्रोत्र बन्न सफल गौतम बुद्ध पिता राजा सुद्धोदन र आमा महामाया थिईन तर जन्म भएकोको सात दिनपछि उनकी आमाको निधन भएको थियो । सानी आमा गौतमीको पालन पोषणबाट हुर्किएका बुद्धले संसार परिवर्तनशील भएको बताउँथ्ये । १६ बर्षको आयुमा दण्डपाणी शाक्यकी छोरी यशोधरासँग उनको विवाह भएको थियो ।
गौतम बुद्धले एउटा बस्तु नष्ट भएर अर्को बन्ने प्रकृया निरन्तर चलिरहन्छ भन्ने गर्थे । जो पछिका दार्शनिक डार्विनले निषेधको निषेध नियम पत्ता लगाए र देखाए । वैज्ञानिक तर्कानुसार “कुनै पनि चिजलाई समयानुसार बदलिन्छ वा, मर्छ । यो चराचर जगतमा निषेधको निषेधले गुणात्मक बिकास पनि गरेको छ ।” मानौं एउटा मकैको दाना सहि पुस्ट हुन्छ भने त्यसबाट एक माना मकै फल्छ । त्यो भन्दा पहिले मकैको दाना जब बिरुवामा परिणत हुन्छ, उसले दानालाई नष्ट गर्छ, जब बिरुवाबाट बोट बन्दै मकैका घुँघा लाग्छन्, बोटलाई सुकाई दिन्छन् । यहि निषेधको निषेध नियमको प्रकृया हो, जो पछि डार्विनले पत्ता लगाए, तर यो कुरा हजारौँ साल पहिले गौतम बुद्धले भन्ने गर्थे ।
बस्तु चाहे भौतिक होस् वा अभौतिक, अनादिकालसम्म रहिरहने र नफेरिने कुनै चिज छैन । गौतम बुद्धले आत्मालाई पनि परिवर्तनशिल मान्द थिए । बेद र कर्म काण्डको मात्रै बिरोधी थिएनन् उनी ब्यक्तिगत सम्पत्तिको पनि कटर बिरोधी थिए । बरु यसो भन्दा ठिक होला कि ब्यक्तिगत सम्पत्तिको नैतिक बिरोध गर्ने ब्यक्तित्व त्यो बेला गौतम बुद्ध नै पहिलो थिए । उनले जोड दिएर भन्थे “सबै मानिसहरुसँग मिलिजुली बस्नु पर्छ । उब्जाएका बस्तुहरु वा पाएका बस्तुहरु सबैले मिलेर बाँडिचुँडी खानु पर्छ र निजि रुपमा कसैले पनि कुम्लाउँनु हुँदैन ।” यसरी बुद्धले बहुजन हितका बिचार उठाए, उनका यस्तै बिचार धाराका कारण कसै कसैले उनलाई साम्यवादी भनेर पनि उल्लेख गर्छन् ।
त्याग, करुणा र अहिंसाका प्रतिक गौतम बुद्ध त्यो शदिमा हाम्रै देशमा जन्मेको गौरवशाली देश हो नेपाल । उनी वास्तब मै एउटा अनिश्वरबादी थिए तर मानव समाजले उनैलाई ईस्वर बनाएर छाडे । उनलाई एउटा सच्चा दार्शनिक भनेर उनले देखाएको बाटोमा समाज हिंड्थ्यो भने हाम्रो समाज अहिलेको यो अबस्थामा हुने थिएन ।
उनलाई कैयौँले देवताको रुपमा पुजे, कैयौँले उनका सालिकहरु स्थापित गरे त्यो छुट्टै बिषय छ, तर कैयौँले उनको जीवन दर्शनबाट ज्ञान हासिल गर्न उनका जीवनहरुको अध्ययन पनि गर्छन् । भारतका संबिधान निर्माता डा. भिमराव अम्बेडकरले उनलाई आफ्नो आदर्शको रुपमा ब्याख्या गर्दै उनीबाट धेरै प्रेणा मिलेको बताउँथे । अहिले छिमेकमा गौतम बुद्धको ब्यापक प्रचार गर्ने गरिन्छ । यसमा उनको के स्वार्थछ भन्ने कुरा साहेद हाम्रा नेताहरुमा लुकेको छैन होला ।
छिमेकीले गौतम बुद्धको जन्म लुम्बिनीमा भएको तर त्यो भारतमा भएको पनि भन्दै आएका छन् र अहिले पनि ठुलो जोड दिएर हाम्रो देशको सान गौतम बुद्ध भनेर भनेको सुनियो । छिमेकले उनको ब्यापक प्रचार गर्नुमा उसको बेग्लै स्वार्थ होला, तर हाम्रो देशमा उनका बिचार ब्यापक रुपमा नफिजाउनु, प्रचारमा ढिलाइ गर्नुमा के स्वार्थछ यो बुझ्न भने सकिएको छैन ।
ठिक हो । गौतम बुद्ध संसारभरिका लागि प्रेणादायक हुन् तर उनी जन्मेको भूमि नेपाल हो । हामीलाई गौरव छ, जो महान दार्शनिक हाम्रो देशमा जन्मिएका थिए ।
दुःखको बिषय यो छ, एउटा महान दार्शनिकलाई उनले देखाएको बाटोमा हिँड्नु भन्दा उनैलाई एउटा भगवानको रुप दिएर, धुपबत्ति जलाएर, पुजा गर्ने गरिन्छ । उनको बिचारको बिकासमा ध्यान दिनुको सट्टा धुपबत्ति सल्काएर आफ्नो जिम्मेवारीबाट हाम्रो समाज पंछिन्छ । यो समाजले भोलि आउँने दिनहरुमा मार्क्स, लेनिन र माओ समेतलाई देवताको रुप दिएर पुजापाठ र उनको सम्झनामा भजन कृतन गर्न थाल्यो भने पनि आश्चर्य मान्नु पर्दैन ।
गौतम बुद्धको जन्म दिनमा उनको मुर्तिमा माला लगाउँने र धुपबत्ति गरेर उम्किने होइन बरु उनले दिएको शंदेश उनको बिचारलाई अपनाएर उनीप्रति न्याय गर्नु नै सच्चा बुद्धभक्त कहेलाउँने छन् ।
← मूल प्रवाहद्वारा इलाहवाद प्रयागराजमा राहात वितरण
हामी हात धोइरह्यौं, उता ८० किलोमिटर ? →